मेरो मनसाय बुझेर होला, उनीहरूमध्ये एकले हामी तपाईसँग बोलिरहेको देख्ो भने मालिकले राम्रो मान्दैनन्, तलब दिने बेला किचकिच गर्छन् । अर्को भाइले 'नेपाल कस्तो छ, उस्तै छ कि केही राम्रो भा'छ दिदी' भनेर प्रश्न गरे । मैले पनि हाँस्दै तपाईंहरू सबै विदेश लाग्नु भा'छ, अनि देश कसरी राम्रो हुन्छ ? तपाईंहरूको देश तपाईंविना कसरी राम्रो हुन्छ भन्दै हाँसेर जवाफ दिएँ । भावुक हुँदै तेस्रो भाइले भने, 'नेपाल गएर के गर्ने ? काम छैन ? हुलदङ्गामा कति हिँड्ने ? पेट त भर्नैपर्‍यो, ऋण तिर्नैपर्‍यो, घर-परिवार पाल्नैपर्‍यो...।' मुखभरि जवाफ पाएर म शान्त भएँ ।
उनको उत्तर सुनेर म स्तब्ध भएँ । यसरी नै पलायन संस्कृति विकास भयो भने यसको दूरगामी असर घरपरिवार र राष्ट्रलाई के होला ? वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको एक महत्त्वपूर्ण जोखिम पारिवारिक विखण्डन, पुनः आप्रवास तथा पलायनको संस्कृति हो । तर मैले व्यंग्य गर्दै उनलाई भनेँ, त्यसो भए तपाईंको भूमिका "भिजिटिङ प्रोफेसरको मात्र हो त घरमा ? महिनामा एकपल्ट तलब अनि २-४ वटा फोन गरेर अभिभावक, श्रीमान, छोरा र नागरिक हुनुको कर्तव्य पूरा हुन्छ ? उनले पुनः जवाफ दिए, यस विषयमा देशले पो सोच्नुपर्छ होइन र ? कसरी आफ्नो नागरिकले देशभित्र शान्तिसँग बाँच्न पाउने ? उसलाई के रोजगारी
म जति दिन साउदी अरब बसेँ, मनमस्तिष्कमा राष्ट्रवाद र व्यवहारवादबीच संघर्ष चलिरह्यो । गर्मी, रुखोपना, बन्द प्रणाली भएको देशमा मानवअधिकारको अवस्था देख्दा हरे...यस्तो देशमा नागरिक पठाउनु कस्तो लाचारीपन, खै त राष्ट्र हितका लागि हामीले काम गरेको ? गरिब राष्ट्रका जनताको मोल भेडा-बाख्राजस्तो हुने त भन्ने लाग्यो । फेरि देशमा कत्ति काम नगर्ने, रक्सीमा मस्त रहने, झैझगडामा समय बर्बाद गर्ने, काम नपाएर घर-समाजका लागि बोझ भएर बसेका नेपालीले साउदीमा अनुशासन सिकेको । समय, पैसा, रोजगारीको महत्त्व बुझेको देखेँ । देशबारे सरोकार उठाएको, चिन्तित भएको, अलपत्रमा परेकाहरूलाई आ-आफूमा पैसा उठाएर अस्पताल लगेको, देश फर्काउन सहयोग गरेको देख्दा असाध्यै गर्व पनि लाग्यो ।
अधिकांश बौद्धिक छलफलमा हुने 'ब्रेन ड्रेन' पूरै सही होइन रहेछ भन्ने मैले सउदी गएर सिकेँ । 'ब्रेन गेन' पनि हुँदोरहेछ भन्ने थाहा पाएँ । कताकता मनमा केही काम नगरेर बस्ने, रक्सी, नशामा लागेर भौंतारिरहेकालाई २ वर्ष अनिवार्य रूपमा अनुशासन सिकाई तह लगाउन साउदी अरब पो पठाउनुपर्ने रहेछ जस्तो पनि लाग्यो । मनमा अवसर वा जोखिमका मिश्रति तरङ्ग, भावहरू गोता खेलिरहे ।
नेपालीसँग भेटघाटको सिलसिलामा रियादबाट हामी दमाम लाग्यौं । बाटोको दायाँ-बायाँ अनन्तसम्म बालुवा नै बालुवा, फुङ्ग उडेको सेतो आकाश, एकैपटक ७ वटा सूर्य उदाएजस्तो गर्मी देखेर फेरि राष्ट्रवादले मभित्र डुबुल्की मार्‍यो । हरे यस्तो निरस ठाउँ, भाषा फरक, संस्कृति फरक, धर्म फरक, खानपिन फरक, पहिरन फरक, अझ त्यसमाथि प्रचण्ड गर्मी सम्झेर कसरी काम गर्दा हुन् नेपालीले भनेर मन भारी भयो । यस्तो दुःखले पैसा कमाएर देशबाट गरिबी निवारण गर्न योगदान दिने यी नेपालीलाई सम्झेर हृदय दुख्यो, आत्मग्लानि भयो । अगाडि एउटा ठूलो ट्रक गुडिरहेको देखेँ । आश्चर्य, त्यसमा त "फेरि भेटौंला" पो लेखिएको रहेछ । त्यहाँका अधिकांश ट्रक, ठूला लरीहरूका ड्राइभर नेपाली हुँदारहेछन् । प्रचण्ड गर्मीमा नेपाली भाषामा लेखिएका उक्त पंक्ति देख्दा पनि शीतल अनुभव भयो । म त आश्चर्यचकित नै भएँ । त्यसपछि एकपछि अर्को ट्रक, लरी नियालेर हेर्दा अरू प्ानि नेपाली भाषामा लेखिएका पंक्तिहरू देखेँ, 'नेपाली मन', 'जय नेपाल', 'नमस्ते', 'बिस्तारै आउनुहोस्', 'तिमीलाई कसैले पर्खिबसेको छ', 'सम्झना जुनीभरिलाई', 'नेपाली टोपी नबिर्सौं', 'मेरो नेपाल' आदि ।
यसपछि मन फेरि देशको यात्रा गर्न थाल्यो । यी श्रमजीवीले विदेशी भूमिमा नेपालै बोकेर हिँडिरहेका छन्, तर यिनीहरूको पसिनाको मूल्य देश र समाजले कसरी चुकाउने ? यिनको सहयोगका लागि के गर्न सकिएला भन्दै मनमा छट्पटी भयो । दुःखको कुरा, हामी यहाँ नयाँ नेपाल निर्माण गर्न संविधानसभा निर्वाचन गर्न लागेका छौं, तर 'मतदानको अधिकार' समेत विदेशमा कार्यरत हाम्रा दाजुभाइले नपाउने भएका छन् । उनीहरू यी सबै बहसदेखि पृथक भएर साउदीको बाटोमा निरन्तर ट्रक गुडाइरहेछन्, सिङ्गो नेपाल बोकेर ।
2 years ago,NRNA NETHERLANDS एन आर एन नेदरल्याण्डले चेलीहरुलाई तीजको दर खुवाउने।
2 years ago,NRNA NETHERLANDS एनआरएन नेदरल्याण्डको कार्यालय उद्घाटन
2 years ago,NRNA NETHERLANDS एन आर एन नेदरल्याण्डको कार्यालय उद्घाटन र अन्तरकृया कार्यक्रम।
2 years ago,NRNA NETHERLANDS क्रिकेटमा नेपाल-नेदरल्याण्ड विच सिधा प्रतिस्पर्धा।